Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre "Dhalinyaradu waa Hormuudka iyo horumarka dalka" | SAHAN ONLINE
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre “Dhalinyaradu waa Hormuudka iyo horumarka dalka”
MUQDISHO – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo weheliyaan Wasiirka Amniga Gudaha iyo Wasiirka Dhalinyarada iyo Cayaaraha, ayaa ka qeyb galay kulan aqoon is-waydaarsi ah oo looga hadlayay sida ay dhalinyaradu hoggaaminta dalka uga qeyb qaadan karaan , ayna soo abaabuleen dhalinyaro is xil-qaantay oo la magac baxay Banana Group.
Mudane Xasan Cali Khayre oo kulanka ka jeediyay khudbad qiimo badan ayaa ugu horeyn amaanay kaalinta dhalinyarada iyo abaabulka ay muujinayaan si dalka loo dhiso.
Ra’iisul Wasaare Khayre wuxuu sheegay in masuuliyiinta dawladdu ay yihiin adeegayaal, halka shacabka Soomaaliyeed ay yihiin milkiilayaasha dalka, sidaas daraadeed ay lama huraan tahay in muwaadin kasta uu kaalin muuqata ka qaato horumarka dalkiisa.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa u balan qaaday dhalinyarada Soomaaliyeed in Xukuumadda ay taageeri doonto qorshe kasta oo horseedi kara horumar iyo nabadgelyo, wuxuuna tilmaamay in dareen gaar ah ay ku reebtay kulankan ay dhalinyarada abaabuleen, iyagoo shisheeye iyo cid kale aanay wax waydiisan.
Wuxuu Ra’iisul Wasaaruhu shahaadooyin guddoon siiyey dhalinyaradii soo qaban qaabiyay kulanka, isagoo dhinaca kale la kulmay shacabkii ku sugnaa beerta Nabadda mid mid ayuu u waydiiyey sida ay doonayaan in dawladdu u shaqayso isla markaana dalkeena horumar uu ku gaari karo, isagoo u sheegay in dawladdu ay ku shaqayneyso aragtida wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed.